WhatsApp shaki la'aan waa barnaamijka ugu caansan ee fariimaha deg dega ah ee dhamaan dadka isticmaala Android. Codsi noo oggolaanaya inaan si xor ah oo fudud ula xiriirno asxaabta, asxaabta ama qoyska. Sidaa darteed, waxay leedahay qayb u gaar ah, halkaas oo aad ka ogaan karto wax walba oo ku saabsan arjiga.
Waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho dhammaan wararka, tabaha ama casharrada ku saabsan WhatsApp qaybtaan. Si aad u ogaato waxa ku dhaca arjiga, imaatinka shaqooyin cusub ama xeelado aad si fiican ugu isticmaali karto taleefankaaga Android. Haddii aad isticmaasho barnaamijka ama aad rabto inaad wax badan ka ogaato, qaybtani waa meesha aad ku habboon tahay.
Sida loo qoro xarfaha leh midabada WhatsApp
by Ignacio Sala samee 3 maalmood .
Balaayiin dad ah oo adduunka ah ayaa WhatsApp-ka u isticmaala sida ugu muhiimsan oo ay ula xiriiraan dadka kale
Sida loo sameeyo sahan WhatsApp
by Ignacio Sala samee Toddobaadyada 2 .
Baaritaano ayaa noo ogolaanaya inaan ogaano ra'yiga, dhadhanka, dookhyada ... dad badan oo ku salaysan su'aalo taxane ah. Haa…
Sida loogu diro goob been abuur ah WhatsApp for Android
by Eder Ferreno samee Toddobaadyada 2 .
WhatsApp waa codsiga fariimaha degdega ah ee ugu caansan Android. Appkan waxa aad ku diri kartaa fariimo,faylal ama...
Ma soo dejisan karo maqalka WhatsApp: maxaa la sameeyaa
by Eder Ferreno samee Toddobaadyada 4 .
WhatsApp waa codsiga fariimaha ugu wanaagsan ee isticmaalayaasha Android. App-kan waxaan sida caadiga ah fariimo ugu dirnaa...
Sida loo jadwaleeyo dirista farriimaha WhatsApp
Hubaal in ka badan hal mar ayay maskaxdaada ka guuxday si aad farriin ugu dirto qof ...
Sida loogu qariyo xiriirada WhatsApp tabahaan
Sababaha noo horseedi kara inaan ku qarinno xiriirada WhatsApp waa kuwa ugu kala duwan oo ku tiirsan, ...
Ciyaaraha lagu ciyaaro WhatsApp
by DaniPlay samee Bilaha 4 .
Ciyaaraha loo maro WhatsApp -ka ayaa mooday dhowr sano hadda. Kala duwanaanshahooda ...
Magacyada kooxda ugu wanaagsan WhatsApp
by Haaruun Rivas samee Bilaha 4 .
WhatsApp waa barnaamijka ugu isticmaalka badan fariimaha deg dega ah ee adduunka, waana taas sababta saxda ah badanaa ...
Qalab badan oo WhatsApp ah, runtii? Waan hubinaa !!
In badan ayaa laga sameeyay WhatsApp qalab istiraatiijiyad badan toddobaadyadii la soo dhaafay. Kadib toddobaadyo sugitaan ah, taasi waa ...
Sida farriin loogu diro WhatsApp adiga oo aan ku darin lambarka xiriirada
Haddii aan jeclaanno iyo haddii kaleba, farriimaha WhatsApp waxay noqdeen habka isgaarsiinta ee ugu ballaaran ee la isticmaalo ...
Kordhinta cabirka font ee WhatsApp Web ama tooska ah ee barnaamijka Android, waa mid kamid ah…
WhatsApp Black, Telegram Black iyo barnaamijyo kale oo si gaar ah loogu beddelay shaashadda AMOLED
Taariikhda WhatsApp: asalka, horumarka iyo guulaha